गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगियो, मन्त्रीहरुको नियुक्ति र शपथ भोलि
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा टुंगो लागेको छ । गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भएसंगै अब भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रीहरुको नियुक्ति र शपथ हुने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले मंगलबार मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा मिलाएका थिए । सहमति अनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री र जसपाले चार मन्त्री लिने सहमति गरेका थिए । कुन-कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लगाएर बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थियो । आज समाजवादीका नेताहरुले पावर मिनिस्ट्री आफूहरुले नपाएको भन्दै प्रस्तावित मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
बिहीबार चार दलका शीर्ष नेताहरु फेरि छलफलमा बसेर मन्त्रालयको भागवण्डा टुंगो लगाएका छन् । सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउनेछ । एकीकृत समाजवादीले भोलि विहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय छाडेको कांग्रेसले भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रोजेको छ ।
यस्तै काँग्रेसले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालिका तथा जेष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लिनेछ । उसले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय यसअघि लिइसकेको छ । कानुन पनि कांग्रेससँगै रहेको छ । यसअघि असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दिन शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए । देउवाले अब कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाएर कानूनमा नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारी गरेका छन् । गृहमा बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्रमा डा. नारायण खड्का मन्त्री छन् । काग्रेसले अरु मन्त्रीहरुको टुंगो भोलि लगाउने बताइएको छ ।
अर्थ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय लिएको माओवादी केन्द्रले अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय ल्याउने छ । माओवादी केन्द्रले देवेन्द्र पौडेल, शशी श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसेको छ ।
यस्तै जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिने भएको छ । जसपाले मन्त्रीहरु छान्न सकेको छैन् । कार्यकारिणी समितिबाट मन्त्री छान्ने अधिकार लिएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईले बिहीबार आकांक्षीहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर नाम टुंगो नलागेको नेताहरु बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २१, २०७८, २०:४१:००